Beeksisa seeraa waayee mudannoo daataa - Office of the Washington State Auditor
SAO Home/ Beeksisa seeraa waayee mudannoo daataa
Beeksisa seeraa waayee mudannoo daataa
Xalayaa Odiitara McCarthy irraa ergame (5/21/2021 kan haara’e)
Waajjirri Odiitaraa Isteetii Washington (“SAO”) marsariitii kana kan haaresse waa’ee tarkaanfilee SAO’n mudannoo nageenya daataa Acheliyeen (Accellion), qaama sadaffaa tajaajila faayila daddabarsuu daataa gurguddaa SAO’n dhimma oditiingiif fayyadamu mudateef deebii kennuuf fudhate irratti odeeffannoo haaraa dhiyeessuuf.
Erga jalqaba waa’ee mudannoo kanaa hubannee kaasee, SAO’n kaayyoowwan lama qaba ture: (1)namoota odeeffannoon dhuunfaa isaanii miidhamuu malu adda baasuu, hubachiisuu akkasumas gargaaruuf galteewwan dhiyeessuu; akkasumas (2) karaa ittiin odeeffannoo dhuunfaa daddabarsinuu fi eegnu fooyyessuu.
Bitootessa keessa, adeemsa yaadachiisota iimeelii namoota odeeffannoon isaanii faayiloota daataa keessa jiru kan kanfaltiiwwan faayidaa hojii dhabdummaan walqabatu kan 2017 fi 2020 gidduu jiru erguu xumurreerra. Yoo akka miidhamuu maltu nii yaadda ta’e, garuu iimeeliin si hin geenye yookaan ammaan achi imeelicha hin qabdu ta’e, marsariitiin kun odeeffannoo wal fakkaataa qaba, akkamitti akka tajaajiloota liqa bilisaa hordoffii fi hanna eenyummaa bakkatti deebisuu kan waggaa tokkoof akka galmooftu dabalatee. Yoo gaaffilee biroo qabaatte, giddugala bilbilaa keenya 1-855-789-0673 irratti, Wiixataa – Jimaataa 8:00 a.m. irraa – 5:00 p.m. Pacific Time’tti bilbili.
Akka qaama qorannoo itti fufaa keenyaatti, nuti dhiyeenya kana madaallii foorensikii faayiloota daataa kan biroo kan yeroo mudannoon sun uumame waltajjii Acheliyeen (Accellion) irra ture xumurreerra. Madaalliin kun odeeffannoo namoota kan biroo kanneen odeeffannoon dhuunfaa jalaa miidhamuu malu adda baasuuf gargaaru nii dhiyeessa. SAO’n odeeffannoo quunnamtii namootaa fudhachuufi mirkaneessuuf akkasumas isaan hubachiisuuf dhaabbatoota isteetii fi naannoo kanneen daataan isaanii itti hirmaatu waliin ni hojjeta. Namootni Lakkoofsi Nageenya Hawaasaa isaanii faayila dataa miidhamee keessa ture tajaajiloota dhiyeessii liqaa bilisaa, ji’oota kudha lamaa hordoffii fi eenyummaa deebisuu nii argatu.
SAO’n waa’ee nageenya daataaf xiyyeeffannoo guddaa kenna akkasumas iccitii odeeffannoo dhuunfaa nurratti imaanaa kenname eeguuf kutataadha. Rakkoo dhimmi kun uumuuf dhiifama guddaa gaafanna. Gaaffii kamiyyuu yoo qabaaatan, bilbilaa kana 1-855-789-0673 fayyadamuun Wixata – Jimaataa sa’aatii 8:00 AM hanga 5:00 PM akka Paasfik Taayim itti nu gaafachuuf dubatti hin jedhinaa. Dabalataan, Fuulaa weebsaayitii, sao.wa.gov/breach2021, kana irraatti odeeffannoo waqtaawaa dhaan ni foyyeessina.
Ooditara Mootummaa Waashingitan
Gaaffilee waa’ee mudannoo nageenyaa Acheliyeen (Accellion) irra deddeebiin gaafataman
Maaltu mudate? Ji’a mudee-walakka 2021, tajaajilli dadabarsaa faayilaa Asseliyoon (Accellion) dhimma mudaanoo rakko nageenyaa kanaa irratti SAO irra yaadachisni keenameefii ture. Battaluma sanatti SAO’n dhimma dabalataaf Acheliyeen (Accellion) qunnamee ture. Torbanoota itti aanan muraasa booda, namni seeraan ala ta’ee akka akkawuntii dadabarsa faayilaa SAO Acheliyeen (Accellion) walin kessaa daataa kuufamee jiru sakatta’uu isaa irra qaqqabe. SAO’n ballina mudannoo sanaa murteessuufi akkasumas dhimma odiitiif akkamitti odeeffannoo SAO’tti ergame akka hubuu malu hubachuuf battala qorannoo eegale, akkasumas faayillota mudannichaan hubamuu malan adda baasuuf Acheliyeen (Accellion) wallin hojjeteera. SAO’n qorannoo isaa akka gargaaraniif ogeeyyii nageenya saayiberii(cybersecurity)’n waltaheera.
Odeeffannoo kamtu itti hirmaatee? Namoota odeeffannoon isaanii faayila daataa faayidaalee hoji dhabdummaan Qajeelcha Nageenya Qaxarriin bara 2017 hanga 2020 keessaa kanfaluuf yaadachiisonni iimeelii dhaan ergamaniiru. Faayiloonni kunneen maqaa namichaa, Lakkoofsa Nageenya Hawaasaa, guyyaa dhalootaa, teessoo daandii fi iimeelii, fi/yookaan lakkoofsa herrega baankii fi lakkoofsa ruutiingii baankii qabaachuu mala.
SAO’n yaadachiisota dhuunfaa namoota odeeffannoon isaanii faayila daataa ejensiilee isteetii fi bulchitoota naannoo kan mudannoo Acheliyeen (Accellion) sanaaan hubamuu akka malu madaallii foorensikiin adda baheefis ergaa jira. Faayiloonni sunneen kanneen itti aanaan tokko yookaan isaa ol – garuu hunda kan hin taane of keessaa qaba: maqaa namootaa, Lakkoofsa Nageenya Hawaasaa, lakkoofsota eenyummeessa barataa, guyyaa dhaloota, lakkoofsota herrega baankii yookan liqaa(credit), lakkoofsota inshuraansii fayyaa, fi/yookaan akkasumas odeeffannoo fayyaa wajjin walqabatu.
Jiraattoonni Waashingitan xiyyeeffannoo keessa galanii jiruu? Mudannichi maammiltoota addunyaalessaa Acheliyeen (Accellion) hubeera, qaama seeraa hojiirra oolchuun yeroo ammaa qoraannoo irratti godhamaa jira. Hanga ammaatti Naannoon Waashinigitan yookin jiraattonni isaanii kamiyyuu mudannooo kana keessaatti ilaammii jala galuu isaanii ragaan ibsu tokko illee hin jiru. Mudannoon kun dhaabbatoota mootummaa federaalaa fi isteetii, naannoo, kan gosaa, fi daangaa akkasumas dhaabbbatoota industirii dhuunfaa fi hojiiwwan kanneen akka sektaroota fayyaa, seeraa, telekomunikeeshinii, faayinaansii, barnoota olaanoo, daldalaa, fi annisaa heedduu hubeera.
SAO’n oomishoota dulloomanii fi yeroon isaanii irra darbe fayyadamaa turee? Yeroo cabsanii seenuun kun mudateetti, Acheliyeen (Accellion) pilaatfoormii daddabarsii faayilaa kan SAO fi dhaabbileen biroo baay’een isaanii itti fayyadamaa turan deeggaraa fi haaressaa ture. Bona gara boodaa 2020 keessa, SAO’n garaa pilaatfoormii Acheliyeen (Accellion) haaraa, Kiteworks’tti jijjiiruuf adeemsa eegalee ture; adeemsi kun Mudde 31, 2020 xumuramee ture.
Yoo Lakkoofsi Nageenya Hawaasaa keessan yoo itti hirmaate ta’e akkamitti hordoffii fi tajaajiloota biroo liqa bilisaan argachuun danda’ama (5/21/2021 tti kan haara’e)
SAO’n liqabilisaa kan ji’oota 12 kan tajaajiloota hordoffii fi eenyummeessaa bakkatti deebi’uu namoota lakkoofsi nageenya Hawaasaa isaanii mudannoo Acheliyeen (Accellion) keessatti jalaa ifatti baheef karaa Experian nii kennama Sababa seera iccitiitiin, kallatidhumaan si galmessuu hin dandeenyu.
Koodii Hojiirra Oolchuu(Activation Code) wajjin yaadachiisi fi qajeelfami tokkoo tokkoo akkatti hordoffii kireditiif Experian’n galma’an yoo si gahe, maaloo qajeelfamoota yaadachiisa sana keessa jiru hordofi. Yoo Lakkoofsi Nageenya Hawaasaa mudannoo Acheliyeen (Accellion) keessa jiraachuu yoo hin hubanne ta’e, yookaan Komunikeeshinii SAO’n siif erge argachuu yoo dadhabde, maaloo giddugala bilbilaa hojjitti of kennaa keenya 1-855-789-0673 irratti, Wiixataa – Jimaataa 8:00 a.m.– 5:00 p.m tti. Sa’atii Paasifikii (Pacific Time) bilbili bakka bu’aan tokko akka ati kireditii hordoffii bilisaaf ulaagaa guutuu murteessuu keessatti si deggeruu danda’a/eessi.
Sagantichi qabiyyeewwan lama qaba:
To’annaa Liqii. Miseensummaa bilisaa ji’a 12 kan Experian IdentityWorks Credit 3B. Meeshaan kun faayadama odeeffannoo seeraan ala ta’ee eejensii gurguddaa liiqaa sadan hordofuu fi tajaajila eegamuu eenyumaa adda baasuu fi hana eenyumaa furuun adda baasaa. IdentityWorks liiqaa 3B’n gutumaatti siif bilisa akkasumas sagantaa kanatti galmaa’uun qabxii liqaa keetii hin midhuu.
Eenyummaa hatame Deebifachuu. Yoo fayyadama seeran ala odeeffannoo keetii yookin hana eenyumaa shakitee, ejentii Ekispeeriyaa(Experian) odeeffannoo Ekispeeriyaa(Experian) kana gadii jiru fayyadamuun qunammuu dandeessa. Tajaajilli kun waggaa tokkoof kan siif kennameedha akkasumas galmaa’uu yookaan tarkaanfii kan biraa kamuu fudhachuun yeroo kanatti sirraa hin eegamu. Erga ejansiin waliin haala kee dubbattee boodaa, yoo gargaarsii deebisaa enyummaa barbaachisa ta’ee, eejansiin deebisa eenyuumaa Ekispeeriya(Experian) qorannoo godhuu fi hanna guyya mudaanichaan jalqabee wal qabatuuf(dabalataaan, akka barbaachisuuti, liiqeessitoota waliin si qunnamsiisuu kanfaltii hambiisuu fi akkawuntii cuufuuf; kallatti liqaa biiroolee gurguddaa liqaa sadan waliin fayadamtuu sitti agarsiisuuf; haala ittiin eejensii motummaa qunamtus sitti agarsiisuun haala eenyumaan kee bakka duritti deebi’uu sitti agarsiisu) furmaata keenuu siif ni dhihaata.
Yoo SAO irraa Koodii Hojii eegalsiisuu (Activation Code) Dhuunfaa wajjin quunnamtii argatte: sagantaa hordoffii/eenyummaa deebisuu liqa bilisaa ji’oota 12’f karaa Experian koodii Hojii Eegalsiisuu dhuunfaa karaa iimeelii “Deebii Mudaannoo Odiitiira Isteetii Waashingten (Washington State Auditor Incident Response)”irraa siif ergametti fayyadamuudhaan galmaa’uu dandeessa. Odeeffannoo dabalataaf www.experianidworks.com/3bcredit ilaalaa.
Karaa lakkofsa bilbilaa sarara bilisaa: 1-833-256-3154 koodii Hojii Eegalsiisuu dhuunfaa keessan fayyadamuun kallatiidhaan gara Ekispeeriyaan(Experian) bilbiluu dandeessu. Wixataa hanga jimaataa 6:00a.m.-8:00p.m’tti bakka bu’ootni isiin gargaaruu fi gaafiii deebisuuf isin eeguu. PST fi Dilbataa/sanbata xiqqaa 8:00a.m.-5:00p.m. PST.
Yoo 2017 fi 2020 gidduutti faayidaalee hoji dhabdummaa fudhattanii jiraattan, garuu iimeelii Koodii Hojii Eegalsiisuu Dhuunfaaa wajjin hin fudhanne ta’e Bitootessa 15, 2021, yeroo galmee haga Waxabajji 6, 2021’ttibanaadha. Ammallee liqa hordoffii Experian’f qajeelfamoota kanneen hordoftanii galmaa’uu dandeessu.
Saganticha keessattii galmaaudhaaf karaa toora bilbilaa bilisa ta’ee fayyadamuudhaan
www.experianidworks.com/3bcredit ilaalaa yookin kallatiidhaan: 1-833-256-3154irratti bilbilaa,
Koodicha dhiyeessuutu sinirraa eegama: WSHAUD2021.
Lakkofsa hirmaannaa dhiyeessuun isin barbaachisa B009702
Galmeen hanga 6/6/2021 itti ni banama.
Odeeffannoo dabalataa waa’ee miseensumaa Ekispeeriyaan (Experian) IDENTITYWORKS Liiqaa 3B kan JI’A 12:
Ekispeeriyaa (Experian) IdentityWorks Liiqaa 3B irratti galmaa’uuf kaardiin liiqaa hin barbaachisu. Dhimmaa hannaattiin walqabattee Ekisperriya (Experian) galmee tokko male qunammuu dandeessu. Ispeeshalistootni deebisa eenyumaa waa’ee hana liiqaa fi kan liiqaa hin taanee irratti sii gargaruuf as jiru.
Erga al tokko Ekispeerriyaa (Experian) IdentityWorks irratti galmoofte isaan armaan gadii argachuu ni dandeessa:
Gabaasa galmee liiqaa Ekispeeriyya (Experian): faayila liiqaa kee waliin odeeffanoo kamtu akka walqabattu ilaali. Gabaasni guyya guyyaa liiqaa kan argamuu miseensoota onlaayiini jiran qofaaf. *
To’annaa liiqaa: Agarisiistuu hannaa(fraud) dhaaf Ekispeeriyaa (Experian), Equifax fi TransUnion si’aayinaan hordofa.
Experian IdentityWorks ExtendCARETM: erga miseensummaan Ekispeeriyaa(Experian) IdentityWorks guyyan isaa
darbee booda illee gargaarsa sadarka olaanaa deebisaa enyummaa ni argata.
$1 inshuraansii hana eenyumaa**: baasii muraasaf uuwisaa fi dabarsaa fandii elekitironikkii seeraan ala ta’ee ni
Miseensonni ooflaayini jiran ergaa galmaa’ani booda akka gaabaasaaf bilbilan ni taasifamu.
** Inshuraansiin hanna eenyuummaa kan dhabbataa Bankaroota Inshuraansii Amerikaattin hogganamu, qama
inshuransii kennu kan ta’ee mallateesserra. Maaloo polisiiwwanii, tarmoota, haalootaa fi uwwisaa hin dabalannee
sirnaan ilaalaa. Haguuggiin bulchiinsota hunda irrattiyyuu argamuu dhiisuu danda’a.
Shaakalliiwwan gaarii hanna eenyummaa irraa of-eeguudhaaf
Waa’ee akkawuntii kee ilaalli yoo waan shakisisuu argitee qama seeraa beeksiisi: Akka of-eeggannoo dursattii dammaqinsan akkaa akkawuntii kee sakataatuu fi dhiheenyaan gabaasaa liiqaa kee ilaali. Akkawuntii irrattii waan shakissisu yoo argite, qamooleee diinagdee yookiin dhaabata akkawuntiin kee jiru beeksiisuu qabda. Gochaa seeraan ala yookiin shakisiisaa kamiyyuu qaama seeraa ilaalatuuti, abbaa alangaa waligaala biyyaa fi/yookiin komishiini Daldalaa Feederaalaa(“FTC”) ibsu qabda.
Garagalchaa gabaasa liiqaa:www.annualcreditreport.com/, dawachuun garagalchaa gabaasaa liiqaa keetti ejensoota ijoo sadan irra ji’a 12 kessatti altokko bilisaan fudhachuu dandeessa. Sarara bilbila bilisaatti bilbilaa 877-322-8228 or guca gaafannoo gabaasaa kan wagga guutuun gara tajaajila gaafanoo gabaasaa liiqaa waggaatti ergaa, P.O. Box 105281,
Atlanta, GA 30348. Karaa ejensii gabaasaa liiqaa biyyaaleessattiin na qunammuu dandeessa:
L.S Poosta 105851
L.S Poostaa 9532
L.S Poostaa 1000
Hubachisaa gochaa seeraan alaa: hubachiisa gocha seeraan alaa gabaasaa kessatti dabaluu qabda ta’a. Akeekkachiisni gocha seeraan alaa bilisaadha akkasumas faayilaa liqii keetti keessatti galmaa’uudhaan waggaa tokkof tura. Hubachiisni kun liiqeefatoota gocha seeraan ala ta’ee gabaasa keessa akka hubatan taasisa kana malees liqqeefataan si qunammuun akka akkawunti maqaa keettin dhaabuu taasisa. Gabaasaa liqii kee irrati gochaa seeraan hubachisuuf,
ejensoota liiqaa sadan armaan olitti ibsaman qunami. Odeeffannoon dabalataa www.annualcreditreport.com irratti ni argama.
Dhorkaa nageenya: waashingiitanii fi baakka biroottii, bakka sirridhaa faayila liiqaa keetti dhorkaa nageenyaa kessa kaa’uuf. Kuni akka liqaan haaraan maqaa keettiin PIN siif keenamee osoo hin faayyadamnee akka hin banamneeef dhorkaa jalqabsiisa. Dhorkaan nageenyaa liiqeeffatootni fedhii kee malee akkaa gaabaasaa liiqaaa kee hin ilaalee dhorkuuf hojjetamee. Sababa Kanaan, dhorkaan nageenyaa gidduu seenuu yookiin harkiifamuu ati liiqaa itti argatuu
sababa ta’a. Eejensii gaabaasaa liiqaa kamiifuu dhorkaa nageenya faayila liiqaa irraa addaa baastee kaa’uu qabdaa. Dhorkaa nageenyaa ka’uuf, ol kaasuuf yookiin baaleesuuf kanfaltiin hin jiru. Dhoorkaa nageenyaa kaa’uuf, gaabaasaa ejensii ittii fayadamaa maqaa guutuu kee, lakkoofsa nageenya hawaasaa, bara dhaloota, tessoo ammaa fi duranii, waraqaa eenyumeessaa, billii, isteetimantii baankii yookin isteetimantii inshuraansii dhiheessuu qabda.
Qabeenya bilisaa dabalataa: ejensii gabaasa itti fayadamaa, koomishiini daldalaa federaala yookiin abbaa alangaa waliigalaa biyya keetii irraa odeeffannoo fudhachuun gochaa seeraan ala eenyumaa irraati godhamuu irraa of ittisuun ni danda’ama. Qaama seeraa, FTC dabalatee yookiin abbaa alaangaa waliigalatii gocha seeraan ala eenyummaa shakiituu kamiyyuu gabaasuu dandeessaa. Odeefannoo qunammtii FTC kunottii:
Koomishinii Daldala Federaalaa, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580
Gocha Sirna gabaasaa liiqaa(FCRA): irraa mirgaa ni qabda. Mirgooni kunis maaltuu akka faayila kee keessa jiru beeku, odeefaanoo sirri yookiin guutuu hin taanee dhorkuu; fi ejensoota gabaasaa itti fayyadammaa akka sireesan yookiin siirri, guutuu, beekamaa kan hin taanee akka balleessan taasisu ni dabalataa. Waayee FCRA irratti odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan, maaloo www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reportingact.pdf ilaalaa.
Taritiiba sagantaa mudannichaa
Amajjii. 12: SAO’n akeekkachiisaa waliigalaa Accelion irraa gara fayyadamtoota pilaatfoormii Kiteworks isaaniitiif waayee mudannoo cimaa eegumsaa irratti meeshaa daddabarsii faayilaa Accellion kan SAO’n kan booda itti hin fayyadamne waliin qaqqabeenii ture.
Amajjii. 13: SAO’n WaTech beeksiee jira akkasumas yeroo garaa SAO itti darbanitti yookin irraa dhufanitti faayiloonni isaan kam akka hubaman beekuudhaaf Accellion waliin qunnamtiiwwan bal’aa ta’an gaggeessaa jira.
Torbee Amajjii 25: SAO’n galmeewwan faayilootaa SAO hubaman keessatti odeeffannoowwan muraasni adeemsa
nageenya qacarrii(Employment Security Department, ESD)irraa odeeffannoo dhuunfaa namoota faayidaalee hojii dhabdummaa fudhatanii kan of keessatti qabaatee ta’uu isaa murteessee jira.
Guraandhala. 1: SAO’n mudannicha hawaasaaf ifa baase SAO’n akkaataa seeroota kaawamanii qajeelfamoota bakka buusii kan hordofe yoo ta’u mudannoo kana ilaalchisee beeksisni jalqaa weebsaayitii SAO sao.wa.gov/breach2021, akan nuti odeeffannoo irraatti gadhiifnu irratti akka maxxanse beeksisee jira.
Guraandh. 12: SAO’n Abukaattoo Waliigalaa(Attorney General) beeksisee jira. Beeksisni kun gaafa Guraandhala. 26 itti dabalame.
Guraandhala. 25: SAO’n waayee namoonni ittiin gaafii gaafatanii fi haala irratti mudatee waliin gargaarsa walitti dhufeenya qabu ittiin argachuu danda’aniidhaaf giddugala bilbilaa bu’ureessuudhaan namoota odeeffannoon isaanii faayidaalee hojii dhabdummaa keessa tureef imeelii erguu eegale.
Liinkiiwwan alaa kanneen barbaadii daataa waliin wal-qabatan